ရေကြီး ရေလျှံမှုကြောင့် ဂျိုင်းပွန်တွန်း ဗောတံတားအနီး၌ ရက် ၂ဝ ကြာ ရပ်နားခဲ့ရသော ကုန်တင်ယာဉ်? - Yangon Media Group
ရေကြီး ရေလျှံမှုကြောင့် ဂျိုင်းပွန်တွန်း ဗောတံတားအနီး၌ ရက် ၂ဝ ကြာ ရပ်နားခဲ့ရသော ကုန်တင်ယာဉ်?
ဂျိုင်း၊ သြဂုတ် ၁ဝ
မိုးသည်းထန်စွာ ရက်ဆက်ရွာသွန်းပြီး ဂျိုင်းမြစ် ရေမြင့်တက်ကာ ပွန်တွန်းဗောတံ တားချဉ်းကပ်လမ်း၌ မြစ်ရေခုနစ် ပေခန့်မြင့်တက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်-ကော့ကရိတ်-မြဝတီသို့ ပြေးဆွဲနေသော ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် တွဲကားကြီးများမှာသွားလာ၍ မရဘဲ ဂျိုင်းတံတားထိပ်နှစ်ဖက်၌ ရက် ၂ဝ ခန့် ရပ်နားစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးနောက် သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်သွားလာနိုင် ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဂျိုင်းပွန်တွန်းတံတား၌ ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီး ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများသွားလာမှုမရဘဲ ရပ်တန့်ထားရမှုအခြေအနေအား ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ် နန်းခင်ထွေးမြင့်သည် သြဂုတ် ၄ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက လာရောက် စစ်ဆေးပြီး အမြန်ပြင်ဆင်ရန် လမ်းညွှန်ခဲ့မှုကြောင့် အဆိုပါတံ တားအား တည်ဆောက်ခဲ့သော သစ်တောက်ငှက်ကုမ္ပဏီမှပြင် ဆင်ပေးခဲ့ရာ သြဂုတ် ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ပြီးစီးသွား၍ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများစတင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည်။
”ဂျိုင်းပွန်တွန်းဗောတံတား ပြန်လည်ဖြတ်သန်းခွင့်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စောင့် နေရတာ ရက်ပေါင်း ၂ဝ နီးပါးရှိပါတယ်။ တံတားဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ကားတွေကို တံတား ဖြတ်ခသာ ကောက်ယူနေတယ်။ အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အခုလိုရက်ပေါင်းများစွာစောင့် နေရတော့ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းနစ်နာတာပေါ့။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လာကြည့်ပြီး ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခိုင်းလို့ အခုလိုဖြတ်သန်းလို့ရတာပါ။ နို့မို့ဆို ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ်ဘယ်လောက်တောင် ရက်တွေ ကြာဦးမယ်မသိဘူး”ဟု ပဲခူးသို့ ကုန်များပို့ဆောင်မည့် ၁၂ ဘီး ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် တွဲကားကြီးများရပ်တန့်စောင့် ဆိုင်းနေရခြင်းကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုလျော့ကျခဲ့ရပြီး ရက် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များပါ နစ်နာမှုများရှိ ကာ နိုင်ငံအတွက်လည်း အခွန်ဘဏ္ဍာဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ် ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသော မိုးစပါး ဧက ၂ဝဝဝဝ ကျော် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်
ကယ်လီဖိုးနီးယား တောမီးဆိုးရွားစွာ ဆက်လက် လောင်ကျွမ်းနေဆဲ၊ သေဆုံးသူ ၄၄ ဦးထိ ရှိလာ
လယ်ကွင်းထဲ၌ လက်ပစ်ဗုံး အဟောင်းတစ်လုံးတွေ့ရှိ၍ ကောက်ယူကြည့်ရှုရာမှ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ ကလေ?
သေမင်းကို မကြောက်ရွံ့သော အန်ထော်နီဟော့ပကင်းစ်
ဖလမ်းမြို့၌ ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်နေမှု ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းထိ ပြီးစီး